Abiy oo u digay Masar: Malaayiin baa diyaar ah hadii dagaal loo baahdo
ADDIS ABABA, Ethiopia – Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya oo ka digay dagaal ka dhashay xiisada biyo xireen oo kala dhaxeysa Masar ayaa xusay in dalkiisu diyaarin karo malaayiin, balse wada hadal lagu xalin karo khilaafka.
“Qaar baa leh waxyaabaha qaar awood bey adeegsan karaan [Masar]. Waxaan caddeynayaa in aysan jirin awood Itoobiya ka joojin karta dhismaha biyo xireenka,” ayuu hadalkiisa ku daray wasiirka koowaad.
Abiy Axmed ayaa hadaladan ka sheegay fadhi ay yeesheen xubnaha baarlamaanka, halkaas oo su’aallo lagu waydiiyay. Waxay ahayd markii ugu horeysay uu dadku la hadlo kadib guushiisa Nobel Peace Prize ee 11-kii October.
“Hadii loo baahdo dagaal, waxaan diyaarin karnaa malaayiin. Hadii kuwa qaar ay Sawaariiq soo ganaan, kuwa kale ayaan adeegsan doona Bombaanooyin. Balse taasi ma ahan danta dhamaanteena,” ayuu hadalkiisa ku daray.
Wada xaajoodyada dhismaha biyo xireenka oo ay ku baxeyso 5 bilyan oo Doollar kaasoo noqonaya midka ugu weyn Afrika isla markaana %70 la dhameeyay lana filayo in uu koronto siiyo 100 milyan, ayaa bishan burburay.
Soomaaliya oo dooneysa iney soo qaado Haweenkii Soomaaliyeed ee Katirsana ISIS ee ku sugaan Xeraada Al-Hawl
Masar, oo haysata shacab badan, ayaa ka cabsi qabta in biyo xireenka Nile uu hoos u dhigi doono qoondadeeda Webiga isla markaana raadineysa in la dhimo mashruuca ayaa ilaashaneysa isheeda ugu muhiimsan ee biyaha.
Warbaahinta taageerta xukuumadda Khartuum oo arrintan ku tilmaamtay “khatar amniga qaranka ah” ayaa baahisay in la qaadi doono talaabo ciidan.
Horaantii bishan, Masar ayaa eedeysay Addis Ababa markii wada hadaladda labada dhinac uu soo dhamaaday iyadda oo aan heshiis la gaarin.
“Wada xaajoodyadda ku saabsan biyo xireenka Renaissance ayaa gaarey xaalad kala istaag ah,” Wasaaradda waraabka Masar ayaa 6-dii bishan October sidaas ku sheegay war-saxaafadeed ay soo saartay kadib burburka wada hadalada.
Bayaanka ayaa lagu sheegay in wafdiga Itoobiya “ay diidaan soo jeedin tixgelinaysa danaha biyaha Masar” soona bandhigeen mid “aan lahayn dammaanad qaad” sidda loola tacaali karo abaaraha mustaqbalka dhici kara.
Itoobiya oo u jawaabay Qaahira ayaa meesha ka saartay eedeymahaas kadib fashilka wada hadaladii u dambeeyay.
“Sheegashada ku aadan in wada xaajoodyada ay burbureen gebi ahaanba waa mid been abuur ah,” ayuu yiri Selishi Bekele, wasiirka Biyaha iyo Tamarta ee xukuumadda fadhigeedu yahay Addis Ababa.
“Waxoogaa horumar ah ayaa la sameeyay … waxaa jira arrimo taagan, laakiin waxaan aaminsanahay in arrimahan wali socda la xallin karo ka hor inta aan la dhameystirin dhismaha biyo-xireenka,” ayuu raaciyay.
Masar waxay ku tiirsan tahay wabiga Niil qiyaastii boqolkiiba 90 baahiyaheeda waraabka iyo biyaha la cabbo waxayna sheegtey inay leedahay “xuquuq taariikhi ah” oo wabiga uu damaanad qaaday heshiisyo laga bilaabo 1929 iyo 1959.